Umgca wokudibanisa icompact wokushicilela China Manufacturer
Inkcazo:Cinezela ukondla iCompact,Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla,Umgca wokuThintela ukuKhangela kwiCompact
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Umgca wokudibanisa icompact wokushicilela
Umgca wokudibanisa icompact wokushicilela
Lokondla line Icwecwe ukuba ukutshayela cinezela iqanjwa a decoiler kunye straightener kwaye ingakumbi elifanelekileyo lokulungisa coil nokuyenza ifumaneke ukuba koomatshini kunye nemisebenzi machining elandelayo.
Lokondla line Icwecwe ngokuba ukutshayela sewayini s uitable ukuba iiprofayili, Ukuhlukunyezwa, laser ukusika kunye nezinye iinkqubo ezininzi machining.
Amacandelo aphambili achaza umgca wokutya iCompact wokushicilela ngokucinezela njengoko kulapha ngezantsi:
MAC4 umtya wokudibanisa umatshini wokushicilela usebenza kumzi mveliso wabathengi bethu.
Umgca wokudibanisa icompact wokushicilela lokwenza umgca wokutya okwenziwe nge-bracket coil sheet.
Lo matshini usebenza esebenzela omnye umzi-mveliso wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lwe-U kunye nomtya wokudibanisa iCompact wokushicilela.
Cinezela ukondla iCompact Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla Umgca wokuThintela ukuKhangela kwiCompact Cinezela ukondla iiNkqubo zeCompact Cinezela Okondlayo Cinezela Ukondla imida eKhonkco Cinezela Cofa Cinezela Amandla ka-3in1